MATIU 5 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (MAT 5)
Mgbe Jisọs hụrụ igwe mmadụ ahụ, o rigooro nꞌelu ugwu.
“Ndị a gọziri agọzi ka unu bụ ma ọ bụrụ na a na-ata unu ụta, na-esogbu unu, ma na-ekwukwa okwu ụgha megide unu nꞌihi m.
“Iwu Mosisi sị onye ọ bụla egbula mmadụ. Ọ bụrụ na onye ọ bụla egbuo mmadụ, a ga-akpọta ya nꞌihu ndị ga-ekpe ya ikpe.
“Iwu Mosisi sịrị onye ọ bụla akwala iko.
“Nꞌime iwu Mosisi a sịrị unu mezuo iyi nile unu ṅụrụ nye Chineke.
Ejikwala ụwa aṅụ iyi nꞌihi na ụwa bụ ebe mgbakwasị ụkwụ ya.
Aṅụla iyi ọ bụla. Kama ka ee gị bụrụ ee gị, ka é, è, gị bụrụ é, è gị. Ihe ọ bụla gafere nke a sitere nꞌekwensu.
“A gwara unu sị, ‘Hụnụ ndị enyi unu nꞌanya, ma kpọọkwanụ ndị iro unu asị.’
Nke a ga-eme ka unu bụrụ ụmụ nke nna unu bi nꞌeluigwe, onye na-eme ka anwụ mụọra ndị ọma na ndị ọjọọ, na-emekwa ka mmiri zooro ndị ezi omume na ndị ajọ omume.
Unu kwesịrị izu oke nꞌịrụ ọrụ ọma, dị ka Nna unu bi nꞌeluigwe si zuokwa oke.